WD8117A/B Ugu Fiican Laba-Qeyb Laabis Laminating Adhesive ee Soo-saaraha Baakada Dabacsan iyo Warshadda | Kangda
Astaamaha iyo codsiga
Astaamaha iyo baaxadda dalabka ee walxaha baakadaha dabacsan ee isku -dhafan
Baakadaha dabacsan ee la isku daray, waa in la isticmaalo in ka badan laba guri oo kala duwan Waxyaabaha isku -dhafan oo ay samaysay alaab baakadeysan oo dabacsan, halabuurku wuxuu cayaar buuxa siin karaa mid kasta oo ka mid ah baakadaha waxqabadka sare leh ee leh faa'iidooyinka maaddada qayb ahaan.
Baakadaha dabacsan ee caaga ah Waxay tilmaamaysaa baakadaha isku jira ee filimka caagga ah. Waxay isku dari kartaa faa'iidooyinka lakab kasta oo filim Si looga gudbo qasaarooyinkooda oo la isu geeyo si loo helo xirmo aad loo jecel yahay Alaabada rarka, waxay buuxin kartaa shuruudaha alaabooyin kala duwan.
Astaamaha ugu muhiimsan ee agabyada isku -dhafan ayaa ah in maaddada isku -dhafan ay leedahay astaamo aad u fiican Marka la eego sifooyinka alaabta shaqsiyeed ee ka kooban isku -darka. Qalabka Baakadaha ee isku dhafan, waxay ku jirtaa qaab dhismeedka micro si loo raaco gunti Wadajir, u ciyaar ciyaar faa'iidooyinka ka kooban walaxda, ballaarinta baaxadda adeegsiga, hufnaanta dhaqaale ee sare waxay ka dhigaysaa xirmo wax ku ool ah oo dhammaystiran Qalabka xirmada, adeegsiga waxqabadkeeda dhammaystiran ee aad u fiican, si loo gaaro Shuruudaha xirmada badeecadda si loo raro.
Waxqabadka baakadaha isku -dhafan ee isku -dhafan ayaa wanaagsan ama xun iyo xabagta la isticmaalo marka Adhesives -ka isku -darka ah, xulashada koollada waa inay tixgelisaa dhejiskeeda, iska -caabbinta Dhex -dhexaadka ah, iska -caabbinta kuleylka, nadaafadda, iwm. koolo tayo leh
Waxaa loo adeegsaday dahaadhka filimka kala duwan ee la daweeyay sida OPP, CPP, PA, PET, PE, Al iwm.
Badeecadani waxay si fiican u xallisaa dhibaatada khilaafaadka ee PE iyo CPP, ka dhig lakabka gudaha si ka sii siman, taas oo u fiican mashiinka samaynta bacda oo leh xawaare sare.
Miisaanka dahaarka oo hooseeya
Si fiican u xalliya isku -dheelitirka isku -dhafka ee PE iyo CPP
J: 1.19 ± 0.01
Xiga: WD8118A/B Laba-Qeyb Koollo Dahaarka Dahaarka leh ee Baakadaha Dabacsan